Chrome 90 wuxuu la yimaadaa horumarin tab, nabadgelyo iyo inbadan | Laga soo bilaabo Linux
Chrome 90 waxay la imaaneysaa hagaajinta tabka, amniga iyo waxbadan
Maalmo ka hor Kooxda horumarinta Google Chrome ayaa ku dhawaaqay sii deynta nooca xasilloon ee Google Chrome 90, kaas oo warka weyn, iyo gaar ahaan kuwa ugu badan ee la filayo noocyadan, waa waxqabadka u oggolaanaya biraawsarka inuu ku xirmo noocyada HTTPS cinwaanka cinwaanka cinwaanka.
Adoo taageeraya HTTPS qaab ahaan, muuqaalkan cusub ee Google Chrome 90 waxaa laga filayaa inuu hagaajiyo asturnaanta isticmaalaha iyo xawaaraha rarka ee bogagga taageera borotokoolkan.
Riwaayad kale taas oo ka muuqata noockan cusub, waa kan Awood u leh in lagu meeleeyo calaamado kala duwan daaqadaha si muuqaal ahaan loogu kala sooco qaanadda desktop-ka. Taageerada dib u magac bixinta daaqada ayaa fududeyn doonta abaabulka shaqada marka la isticmaalayo daaqadaha biraawsarka kala duwan ee shaqooyinka kala duwan, tusaale ahaan, marka la furayo daaqado kala duwan oo loogu talagalay howlaha shaqada, danaha shaqsiyadeed, madadaalada, waxyaabaha la daahiyay, iwm.
Magaca waxaa lagu beddelay sheyga "Add windows window" ee ku jira qaabka macnaha guud ee muuqda marka aad midig u gujiso meel madhan oo ku taal tabka.
Ka dib markii lagu beddelay barta barnaamijka, magaca la xushay ayaa la soo bandhigayaa halkii magaca goobta ee tabka firfircoon, kaas oo waxtar yeelan kara marka la furayo isla bogagga daaqadaha kala duwan ee ku xiran koontooyin gaar ah. Xidhiidhka ayaa la ilaaliyaa inta udhaxeysa kalfadhiyada iyo dib u bilaabida daaqadaha waxaa lagu soo celin doonaa magacyada la xushay
Dhinaca kale, gudaha Dhinaca amniga, Google wuxuu sii wadaa istiraatiijiyaddiisa ku saabsan xoojinta amniga biraawsarkaaga. Si loo ilaaliyo amniga loona ilaaliyo nuglaanta, Google waxay ku dhawaaqday inay taageertay muuqaalka Intel's Flow Control Application Security (CET) iyada oo loo marayo kumbuyuutarkeeda Chrome.
Astaantan amniga ah ayaa loo qaabeeyey si looga ilaaliyo xogta isticmaaleha weerarada Barnaamijyada ku jihaysan Soo Noqoshada (ROP) iyo Jump Oriented Programming (JOP).
WeerarkanR ROP iyo JOP waa khatar waxayna gaar ahaan adagtahay in la ogaado ama laga hortago maxaa yeelay waxay wax ka beddelaan dhaqanka caadiga ah ee barnaamijka si loo fuliyo koodh xaasidnimo ah. Intel wuxuu si firfircoon ula shaqeeyey Google iyo la-hawlgalayaasha kale ee warshadaha si loola dagaallamo noocyada weerarrada iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada CET iyada oo lagu kaabayo xalalkii hore loo hirgeliyey.
Isbeddel kale oo amniga la xiriira ayaa ah taageerada lkala-jajabinta shabakadda si looga ilaaliyo hababka raadraaca dhaqdhaqaaqa isticmaalayaasha inta udhaxeysa boggaga ku saleysan keydinta aqoonsi ee meelaha aan loogu talagalin keydinta macluumaadka joogtada ah ("Supercookies").
Sababtoo ah ilaha keydka ah waxaa lagu keydiyaa goob magac wadaag ah, iyadoo aan loo eegin meesha laga soo xigto, hal goob ayaa go'aamin karta culeyska kheyraadka ee degel kale iyadoo la hubinayo in la arko haddii kheyraadkani ku jiro keydka.
Badbaadintu waxay ku saleysan tahay adeegsiga qormooyinka shabakadda, oo nuxurkeedu yahay kudar diiwaanka domainka ee iskuxirka kaydadka la wadaago kaas oo ka furmaya bogga ugu weyn, xaddidaya baaxadda keydka loogu talagalay qoraallada raadraaca dhaqdhaqaaqa kaliya barta hadda jirta (qoraalka iframe ma xaqiijin karo haddii ilaha laga soo raray goob kale). Qiimaha kala-baxa ayaa hoos ugu dhacaya waxtarka keydinta,
Iyadoo isbeddelada u muuqda kuwa horumariya, waxaan ka heli karnaa hagaajinta waxqabadka guryaha "super" (tusaale ahaan, super.x), oo loogu talagalay kaydka internetka. Waxqabadka isticmaalka "super" hadda wuxuu ku dhow yahay helitaanka guryaha caadiga ah.
Intaa waxaa sii dheer, shaqeynta qiyaasta nalalka WebXR AR waa la xasiliyay, taasoo kuu oggolaaneysa inaad qeexdo xuduudaha iftiinka aaladda ee WebXR fadhiyada dhabta ah ee la kordhiyay si loo siiyo moodooyinka muuqaal dabiici ah oo dheeri ah iyo is-dhexgal aad u wanaagsan oo lala yeesho deegaanka isticmaalaha.
Sidee loo rakibaa Google Chrome 90 Linux?
Haddii aad xiiseyneyso inaad awood u yeelatid rakibidda noocyadan cusub ee bog-shabakadeedkan oo aanad weli rakibin, Waxaad ka soo dejisan kartaa rakibayaasha lagu bixiyo xirmooyinka deynta iyo rpm boggeeda rasmiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Chrome 90 waxay la imaaneysaa hagaajinta tabka, amniga iyo waxbadan
Soodhawrka Xeerka Wiki: Shabakad ka mid ah hababka aaminka ah ee habdhaqanka wanaagsan
FOS-P5: Baadhitaanka isha furan ee furan ee Facebook - Qaybta 5